ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံ ၅၀ တွင် မြန်မာ အဆင့် ၅၀ သို့ ရောက်ရှိဟု အမေရိကန် သတင်းနှင့် နိုင်ငံတကာရေးရာအစီရင်ခံစာ ဖော်ပြ - Eureka Myanmar | Myanmar news, headlines, top stories , culture and entertainment.
Home Military Myanmar News Political WorldNews ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံ ၅၀ တွင် မြန်မာ အဆင့် ၅၀ သို့ ရောက်ရှိဟု အမေရိကန် သတင်းနှင့် နိုင်ငံတကာရေးရာအစီရင်ခံစာ ဖော်ပြ
Military Myanmar News Political WorldNews
ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံ ၅၀ တွင် မြန်မာ အဆင့် ၅၀ သို့ ရောက်ရှိဟု အမေရိကန် သတင်းနှင့် နိုင်ငံတကာရေးရာအစီရင်ခံစာ ဖော်ပြ
- ကမ္ဘာ့ အင်အားအကောင်းဆုံးနိုင်ငံများကို အဆင့်သတ်မှတ်သောအခါ အင်အားဆိုသည်မှာ အဆိုပါနိုင်ငံ ရမှတ်၏ ၇-ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ကြောင်း အမေရိကန် သတင်းနှင့် နိုင်ငံတကာရေးရာအစီရင်ခံစာက ဖော်ပြသည်ဟု News Week က ယနေ့ ရေးသားဖော်ပြသည်။
သို့သော် အင်အားဆိုသည်ကို မည်ကဲ့သို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမည်နည်း။ အချို့က စစ်အင်အားဟု ပြောကြပြီး အချို့ က စီးပွားရေးတောင့်တင့်ခိုင်မာမှု့ဟု ဆင်ခြေပေးကြပါသည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအပေါ် ဆီလျှော်သော အဆင့်သတ် မှတ်ရန်အတွက် တိုင်းတာနည်းမျိုးစုံရှိနေမည်ဖြစ်သည်။
#ခေါင်းဆောင်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် အင်အားတောင့်တင်း၍ ကွပ်ကဲထိန်းချုပ်ရာတွင် အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သော ခေါင်းဆောင်လိုအပ်သည်။
#စီးပွားရေးသြဇာ။ ငွေသည်ကမ္ဘာ၌ တွင်ကျယ်သည်။ အခြားနိုင်ငံများအား ပြောစကားနားထောင်လာစေမည့် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
#နိုင်ငံရေးသြဇာ။ အခြားနိုင်ငံများ ရိုသေခန့်ညားစေမည့် ကုလသမဂ္ဂတွင် ဆီလျှော်သော နေရာရရှိမှု့၊
#ခိုင်မာသောစစ်ရေးမဟာမိတ်။ အကယ်၍ စစ်ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသော် စစစ်တိုက်တိုက်ရန်အသင့်ရှိမှု့မှာ နိုင်ငံတိုင်းအတွက် လိုအပ်သည်။
ထိုအချက် ၅-ချက်နှင့် ကမ္ဘာ့အင်အားအကောင်းဆုံးနိုင်ငံ ၅၀ ကို ရေတွက်နိုင်သည်ဟု အမေရိကန် သတင်းနှင့် နိုင်ငံတကာရေးရာအစီရင်ခံစာက ဆိုပါသည်။ ဤတွင် ထိပ်တန်း ၁၀- နိုင်ငံမှာ ထိုအဆင့်မျိုးရကြသည်ကို အံ့သြရန်မရှိချေ။
ဖော်ပြသမျှအားလုံးတွင် ပထမ ၃- နိုင်ငံမှာ စစ်ရေးအသုံးစားရိတ်တွင် လက်ကြီးသူများဖြစ်ကြသည်။ ပထမရ၍ မည်သူမျှ ဆုမပေးသော်လည်း ဤနေရာတွင် အမေရိကန်သည် ဗိုလ်စွဲလေသည်။ နိုင်ငံတကာအကူအညီများ ဗုံးပေါလအော ပေးကမ်းနိုင်ပြီး အထင်ကြီးလောက်သော စီးပွားရေးရှိသည်။ သို့သော် အချို့ ၈-နိုင်ငံ ၉-နိုင်ငံ ခန့်မှာ ၄င်းတို့၏ တစ်ဦးချင်းငွေသုံးနိုင်အားထက်ပို၍ စစ်ရေးအသုံးစားရိတ်သတ်မှတ်ရာတွင် အမေရိကန် ထက် ပိုသည်။
အထူးသဖြင့် နိုင်ငံငယ်များအတွက် အင်အားသတ်မှတ်ရာတွင် ခိုင်မာသော မဟာမိတ်ရှိခြင်းကို အလေးထားရမည်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ ၂၀-ခန့်အတွက် ယခုအဆင့်မျိုးရရှိသည်မှာ ၄င်းတို့၏ အခြားနိုင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံရေး ဖြစ်သည်။ ထိပ်ပိုင်း ၆-နိုင်ငံတွင် ၄-နိုင်ငံမှာ ထိုသို့သော အရည်အချင်းကြောင့်ဟု မှတ်ယူရသည်။
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်မှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အင်အားဆိုသည်မှာ ၄င်းတို့၏ လွှမ်းခြုံအဆင့်နှင့် သိပ်မပတ်သက်လှခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ လွှမ်းခြုံအဆင့် ထိပ်တန်း နိုင်ငံ ၂၀-တွင် ဂျာမနီ၊ ဗြိတိန်နှင့် ဂျပန် ၃-နိုင်ငံသာလျှင် နှစ်နေရာစလုံးတွင် သိပ်မကွာချေ။
အားလုံးကို ခြုံ၍ ကြည့်လျှင် ကမ္ဘာ့အင်အား အနည်းဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် ဆလိုဗေးနီးယားနိုင်ငံကို အခြေခံလျှက် နိုင်ငံ ၈၀ ကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ၄င်းတွင် လတ်ဗီးယား ၊ ဥရုဂွေးနှင့် ကိုစ်စတာရီကာတို့မှာ သိပ်နောက်တန်းမကျလှချေ။
( အထက်ပါစာရင်းတွင် မြန်မာအား တောင့်တင်းသော စစ်အင်အား အမြင့်ဆုံးရှိခြင်းကြောင့် လွှမ်းခြုံအဆင့် ၀.၅ မှတ် ဖြင့် နိုင်ငံတကာအဆင့် ၅၀ အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ကာကွယ်ရေးအသုံးစားရိတ်တွင် အရှေ့တောင်အာရှ ၉-နိုင်ငံ၌ မြန်မာသည် စင်္ကာပူ၏ ထက်ဝက်မျှသာရှိပြီး ကာကွယ်ရေးအသုံးစားရိတ် အနည်းဆုံး ၃- နိုင်ငံတွင် ပထမဖြစ်သည်။ သတင်းဘာသာပြန်သူ )
So, who are the most powerful countries in the world? Click through to find out:
When ranking the 50 best countries in the world, power defines seven percent ofanation’s score, according to U.S. News and World Report.
But how do you define power? Some might say it comes down toacountry’s army, others might argue its whoever has the largest economy. Like the overall country rankings, these lists need several metrics to registerafair result.
Economically influential: Money runs the world, it’s the best way to get other countries to listen.
With these five points, U.S. News and World Report was able to quantify the world’s 50 most powerful countries—and the top 10 shouldn’t be too much ofasurprise.
Interestingly,acountry’s power rarely coincided with their overall ranking. Of the top 20, just three countries hadapower ranking that was comparable (within two spaces below and above) to their overall result—Germany, the United Kingdom and Japan.
Tags: Military Myanmar News Political WorldNews